क्रिकेटमा दौडीयो नेपाल-Nagarikaawaj.com
क्रिकेटमा दौडीयो नेपाल
सोमवार, चैत्र १०, २०७०
नेपाल ! नेपाल ! नेपाल ! शहर, गाउँ, टोल अनि हरेक घर र कुनाहरुमा केहि साता अघिदेखि यो शब्द गुञ्जायमान थियो । वास्तवमै यस्तो लाग्थ्यो कि अहिले मुलुकको माहोल पक्कै पनि कुनै राष्ट्रवादी राजनैतिक घट्नाले ओतप्रोत छ । तर यथार्थमा त्यो वास्तविकता फरक थियो । नेपाली खेलकुदको इतिहासमै पहिलो पटक शिर्ष प्रतियोगिता क्रिकेटको कान्छो स्वरुप विश्वकप टि–२० क्रिकेटमा सहभागिता जनाइरहेको नेपाली टोलीको हरेक खेलहरुमा नेपालीहरुको मुखबाट निस्कने यो नेपाल शब्द विशेष रहन पुग्यो ।
नेपाली खेलकुदले धेरै प्रतीÔा गर्नुपरेको दिन । नेपाली खेलकुद प्रेमीको त्यही प्रतिक्षाको दिन ट्वान्टी–२० विश्वकप वगंलादेशमा सुरु मात्रै के भएको थियो विश्वभरी छरिएका लाखौ नेपाली मनहरुको नेपाल शव्द एकजुट हुन पुग्यो । यहि एकजुटलेनै नेपाली भाषामा भनिने ‘पहिलो गासँमै ढुगां’ शव्द सुन्न परेन । वरु पहिलो यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेको नेपाली टिमदेखीनै एकखालको डर अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुलाई पैदा हुन पुग्यो । र, आउने प्रतिस्पर्धामा सजिलै जितीन्छ भन्ने भ्रम पनि नेपालले चिर्न सफल भयो ।
नेपालको प्रदर्शन विश्वकपमा कस्तो हुनेहो । अव्वल मानिने अन्य प्रतियोगी टिमहरुबाट फेरी पनि त्यही हारकै भार वोकेर नेपाल फर्किन पर्नेत हैन जस्ता आदिईत्यादि प्रश्नहरु नेपालीहरु पटक पटक सोच्दै गर्दा एकाएक यो शव सोचाई र मानसिकता विर्साउने गरि नेपाली टिमले वगंलादेशमा जस्तो खेल खेले त्यो नै विश्वकप जिते शरह हो ।
एउटा आम नेपालि भएर अहिलेका लागि यो भन्दा गर्व र खुसि हुने पल अरु केहि छैन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामा भन्छन्, –‘अहिले क्रिकेटमा जुन सफलता हासील गरेको छ नेपालले त्यसमा यो सफलतासँगै अन्तराष्ट्रिय रुपमा राम्रो छाप समेत छोडेको छ ।’ मेरो र क्रिकेटप्रेमीहरुका लागी मात्रै हैन, यो हरेक नेपालीका लागी गर्विलो कुरा हो, सदस्य सचिव लामा भन्छन् । क्रिकेटमा अव नयाँ पहल थाल्ने र फरक ढगंले सोच्ने वेला आएको छ, उनले भने ।
अहिलेको सफलताले नेपालका अन्य खेलाडीहरुमा समेत थप प्रोत्साहन मिलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यहि सफलतासँगै खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव लामाले अव आफुहरुपनि थप उत्साहीत भएर अघि वढ्ने प्रतिवद्धता लिएको समेत वताउँछन । केही प्रर्यास गर्ने मात्रै हैन अव प्रक्रियागत रुपमा क्रिकेट क्षेत्रका लागी हामी अगाडी वढ्दै जानेछौं, उनले भने ।
यस अघि आईसीसीबाट आउने रकमवाटै हिनामिना भएको स्विकार्दै लामाले अव चाहि त्यसो गर्न नहुने र त्यो रकमलाई सहि ठाउँमा सदपुयोग गर्नुपर्ने वताउँछन । विगतमा कम चासो दिने नेपालीहरु क्रिकेटका फ्यानहरु अहिले ह्वात्तै वढेको र यो सफलतासँगै सफलतासँगै पव्लीकको चासो र सरकारको चासो अन्य सघंसस्थाँको चासोपनि राम्रैसँग वढेको छ, सचिव लामाले भने ।
कुरा नेपाल अव क्रिकेट क्षेत्रमा कसरी अगाडी वढ्ला भन्नुभन्दा पहिला यहि विश्वकपकै शव्द फेरीपनि दोहो¥र्याउनुपर्छ । नेपालको प्रर्दशन जस्तो छ । जुन स्तरको खेल विश्वमाझँ प्रस्तुत ग¥र्यो यसले अव नेपाली एकतालाई पनि एउटा राम्रो सन्देश दिएको छ । फुटेर हैन जुटेर मात्रै केही हुन्छ । नेपालको राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र मात्रै हैन हरेक क्षेत्रमा एउटा राम्रो सन्देशपनि विश्वकप प्रतियोगीतामा नेपालको प्रदर्शनले देखाएको छ ।
यो नेपाली खेलकुद ईतिहासमा सवैभन्दा ठुलो सफलता र उपलव्धी ठानेको छु, रुपन्देही क्रिकेट सघंका अध्यक्ष पशान्त विक्रम मल्ल भन्छन् । मलाई लाग्छ नेपाल विभीन्न वाधाअवरोधका वावजुदपनि आफै सघंर्ष गरेर विश्वकपमा छनौट भएर जुन खालको प्रर्दशन र वहादुर देखाए यो नै नेपाल विश्वकप खेल जिते वरावर हो, उनले भने ।
साच्चीकै भन्नेहो भने काठमाण्डौको मैदान वाहेक नेपाली खेलाडीहरु जति अभ्यास खेल्छन्, टुर्नामेन्टमा सहभागी हुन्छन् ति सवै खेलहरु खेत र सामान्य कुनै मैदानमा वाहेक अरु कहि भएको देखिदैन । न त क्रिकेट क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले गम्भिर भएरनै सोचेको छ, फुटवललाईजत्तिको पनि सोचेको छैन । ‘यदि फुटवलमा जत्तिको मात्रै सहयोग नेपाली खेलकुदमा सरकारले गर्छ भने विश्वकपमा यो भन्दा पनि वढि सफलता पाउनेथियो नेपालले’ पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहेका मल्ल थप्छन् ।
नेपाल अन्य राष्ट्रहरुसँग जति खेल खेलेको छ यो विश्वकपको तुलनामा सफलता पनि कम र विश्वमाझँ चिनीने अवसर पनि कम थियो । कुनैपनि खेलमा विश्वकप खेल्ने सम्भावना नरहदाँपनि गरिव छोरोको डाक्छर भनेसरह आफ्नै मिहेनतले गरेको खेलाडीहरुको यो प्रयासलाई हरेक खेलप्रेमीहरुले सल्युट गरेका छन ।
काठमाण्डौंको एकमात्र दशरथ रगंशाला वाहेक वेला मौकामा खाली हुने घर नजिकैको खेत र वारीलाई क्रिकेट मैदान र आलि र भित्तोलाई छक्का र चौकाको घेरा मान्दै खेल्ने नेपाली क्रिकेटरहरुले ५ वर्षअघि फुटवलमा पाएको जत्तिको सेवासुविधा पाएको भए अहिले विश्वकपमा थप अगाडी वढ्थ्यो मात्र हैन अन्य वलिया मानिने भारत, पाकिस्तान लगायतका देशहरुसँग पनि शानदारका साथ खेल्न सक्थ्यो भन्ने दावि गर्न सकिन्छ । सुरुदेखीनै खेलाडीहरुले टे«निङ प्रर्याप्त पाएको भए र अघि भनिएझै अन्य सरचंनाहरुपनि राम्रा भएको भए अहिले नेपालको क्रिकेट स्तर यो स्थितीमा रहदैनथियो । तर पनि अहिले सारा ससांरले तारिफ गर्दा भन मन लाग्छ, अव क्रिकेटमा पनि लगानी गरौं, क्रिकेटले मात्रै देशलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनाउन सक्छ ।
क्रिकेटमा सधै सकारात्मक हुनुपर्छ । त्यसमाथि ट्वान्टी–२० मा सबैखाले सम्भावना जीवन्त रहन्छ । यसको अर्थ हामी सुपर टेन पुग्छौं भन्ने हैन तर हामीले त्यसका लागि प्रयास गर्नेछौं । यसका लागि नेपाली क्रिकेट सÔम छ,’ नेपाली टिमका प्रशिÔक पुवुदु दसानायेकेको खेल खेल्न जानु अघिनै भनेका थिए । उनले भनेझै अव क्रिकेटमा पनि नेपाली अघिद्द वढिसक्यो । क्रिकेटमा नेपाल सक्षम छ ।
यद्यपी ट्वान्टी २० क्रिकेटमा खेलेका ३ प्रतिस्पर्धी टिमहरुसँग नेपाली व्याट्सम्यान खुलेर खेल्न नसकेको चाहि पछि उनले भनेका छन् । कारण उनले नभनेपनि नेपाली खेलाडीहरुलाई टे«निङ कमि हुनुहो । अरु देशमा जस्तो सरकारवाट चासो कम दिईनु पनि हो ।
अरुवेलामा हारले रुवावासी हुन्थ्यो तर अहिले क्रिकेटमा २ जितसँगै एउटा हारलेपनि अगाडी जान नसकेको नेपाली क्रिकेटको प्रगतिले गर्वका आसुँ वगाएको छ । खुसीले ठाउँमा खुट्टा छैन ।
यतिवेला सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई ५÷५ लाख दिने र अन्य ठाउँवाट पनि पुरस्कारको ओईरो लागीरहेका बेला नाक फुलाएर वस्न चाहि ठ्याक्कै मिल्दैन । अब खेलाडीको बिकास र पूर्वाधार निर्मार्णमा ध्यान दिनैपर्छ । एकछिन गरेझै गर्ने प्रवृत्तीलाई पाखा लगाउदै अघि वढ्नुपर्छ अव नेपाल । खेलाडीहरु उत्साहीत हुदैमा मात्रै हुदैन, सरकारको राम्रो प्रयासले क्रिकेटमा अघि वढ्न सकिन्छ ।
विश्व क्रिकेटसामु नेपाल चिनाउने एउटा अवसरलाई राम्रो सदुपयोग गरेको नेपालको यो प्रर्दशनले त्यसपछि विश्वको नक्सामा ‘नेपाल’ खोज्न गाह्रो हुने परिस्थिती वदलिदै दुनियाले तारिफगर्दै चिन्न थाल्नुमा नी ठुुलो खुसी मिलेको छ ।
नेपाली टोलीले पहिलोपटक विश्वकप खेलेको हो । यसले मात्रै हामी खुसी भएनौं । हाम्रो चन्द्रसुर्य वगंलादेशमा २० ओभरको क्रिकेट विश्वकपमा भारत, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलकां, अस्टे«लिया वेलायतसँगै अन्य विभीन्न १६ वटा देशका झण्डासँगै फर्फराउ“दा लाखौं नेपालीको शिर गर्वले अग्लिएको समेत छ । यो क्षणको प्रतीÔा हामीलाई वषौदेखी थियो । हामीले क्रिकेट खेल्न थालेदेखि नै विश्वकपको सपना साँचेका थियौं त्यो सपना पूरा हु“दा मलाई वोल्ने शब्द खोज्न गाह्रो भैरहेको छ । हङकङसँग शानदार जितपछि नेपाली कप्तान पारश खड्काल भनेको शव्द हो यो ।
आश्चर्यको खेलका रुपमा चिनिने क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीले त्यही अनुरुपपको प्रदर्शन गर्दै नेपालीलाई गर्विलो वनाएका छन । सन १९९८ मा नेपाली भूमिमा एसिसी ट्रफी जित्े वगंलादेशका केही खेलमा टोलीमा अटाउन नसकेका मोहम्मद रफि कले आफ्नो देशले चा“डै विश्वकप र टेस्ट खेल्ने कुरा गर्दा, त्यो उनको हावादारी गफ जस्तो लाग्थ्यो । अहिले त्यही छिमेकी राष्ट्र टेस्ट मान्यता पाएर निकै बलियो भइसकेको छ ।
तर नेपालले पाएको यो ऐतिहासिक सफलतालाई उपलव्धीमा वदल्न नेपाली क्रिकेटले आगामी दिनमा विश्वकपमा विजय र टेस्ट राष्ट्रको मान्यताको सपना देख्नुपर्छ । विश्वभरका नेपालीको ढुकढुकीलाई एकै चालमा चलाउन सक्ने र एउटै कामनाको प्रार्थनामा भुलाउन सक्ने खेलाडीले यतिवेला देश र हामीलाई अतुलनीय खुसी दिएका छन ।